महामन्त्री पदका उम्मेदवार रिजाल भन्छन् – महाधिवेशनबाट सुन र पित्तल छुट्टियो
रक्षामन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री पदका उम्मेदवार डा. मीनेन्द्र रिजालले महाधिवेशनबाट सुन र पित्तल छुट्टिएको बताएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति सभापति पदका उम्मेदवारहरू प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई लक्षित हो ।
‘सुन र पित्तल छुटिन्छ भनिन्छ तातोमा । सुन र पित्तल छुट्टिएको छ । साथीहरू मसँग अलिक निराशाको कुरा गर्नुभएको छ । तर साथीहरू कठिन बाटोमा हिँड्ने कांग्रेस बनाइ छाड्छौँ’, रिजालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
उनले सभापति पदमा पराजित डा. शेखर कोइराला पराजित भएपछि विजयी भएको महसुस भएको दाबी गरे ।
‘शेखर कोइरालालाई मत दिर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । विचारको विजय भइसकेको छ । जनताको बीचमा रहेर फेरि आशा जगाएर जान्छौँ ।’
कांग्रेस बीपी कोइरालाले भने जसरी चल्नुपर्ने रिजालको मत छ । निर्वाचनमा जित र हारलाई महत्वपूर्ण ठान्न पनि नहुने बताए ।
उनले कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनाएर देशको विकास गर्नु अवसर आएको र सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई त्यो चुनौती रहेको उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : मंसिर २९, २०७८ बुधबार १६:२०:१३,